Madaxwaynaha Puntland: “Duqaynta Daacish ee gobolka Bari waa ay sii socon doontaa” – Radio Daljir
Madaxwaynaha Puntland: “Duqaynta Daacish ee gobolka Bari waa ay sii socon doontaa”
Diseenbar 2, 2017 6:39 b 0
Madaxwaynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay sii socon doonaan duqaymaha ka dhanka ah kooxda Daacish ee ka socda gobolka Bari.
Isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa waraysi uu siiyay madaxwaynaha BBCda laanteeda Afka Soomaaliga ayaa waxaa uu ku sheegay inay dowladda la socoto duqaymaha ka dhanka Daacish ee lagu fuliyay deegaano hoostaga dhulka beeralayda ah ee degmada Qandala.
Madaxwayne Gaas ayaa sheegay duqayntii Mareykanku fuliyay todobaadkii hore lagu dilay sarkaal katirsan Daacish, waxaana uu xusay in dhanka kalle ay ka horeeyeen howlgalo ay ciidamada dowladda ay ku qaadeen kooxda Daacish.
Waxaa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in dad shacab ah la waxyeeleeyey, madaxwaynaha Puntland ayaa dhanka kalle sheegay inuu soo dhoweynayo howlgalada ka dhanka ah Daacish.
Todobaadkii hore ayay ahayd duqayn diyaaradeed oo ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Qandala, inkastoo dad deegaankaasi joogay ay sheegeen inuu ku dhintay nin ka mid ah dadka dhirta xijiga loo yaqaan gurayay.